मंसिर जान लागेकामा केकीलाई किन लाग्यो चिन्ता? - ramechhapkhabar.com
मंसिर जान लागेकामा केकीलाई किन लाग्यो चिन्ता?
आफूभन्दा पछि चलचित्र क्षेत्रमा आएका धेरै अभिनेत्रीले घरजम गरिसके पनि नायिका केकी अधिकारी भने अविवाहितै छिन्। अहिले पनि उनलाई फुर्सद छैन, चलचित्रमा निकै व्यस्त छिन्।
अभिनयसँगै केकीको बिहेबारे पनि मानिसहरूलाई निकै चासो छ। विवाह गर्ने महिना आउनासाथ पत्ररकारदेखि प्रशंकसम्म उनलाई सोध्ने गर्छन्– बिहे कहिले गर्ने? जवाफमा केकीले भन्ने गरेकी छन्– भनेजस्तो केटा नै पाएको छैन।
नभन्दै यो मंसिर पनि बित्न लागेपछि केकी चिन्तामा परेकी छन्। सामाजिक सञ्जालमा उनले लेखेकी छन्– मंसिर पनि जान लाग्यो त!’ साथमा आफ्नो तस्बिर पनि सेयर गरेकी छन्। अविवाहित केकी अनि मंसिर जान लागेकामा चिन्ता, बिहेको कुरा नभएर अरू के होला त?
‘चपली हाइट ३’ को रिलिज मिति सर्‍यो
नेपाली हरर चलचित्र ‘चपली हाइट ३’ को रिलिज मिति सरेको छ । पुस २ गते रिलिज मिति तोकिएको चलचित्रले नयाँ रिलिज मिति तोकेको छ । सोमबार एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गरेर निर्माण टिमले नयाँ रिलिज मिति घोषणा गरेको हो ।
“यसपालि मेरो चलचित्र ‘चपली हाइट ३’ यही पुस २ गते प्रदर्शनमा आउने भनिएकोमा विविध कारणवस यस मितिमा प्रदर्शन नहुने जानकारी दुखका साथ जानकारी गराउँदछु । साथै हाम्रो चलचित्र अब नयाँ मिति पुस १५ गते प्रदर्शनमा आउने छ भनी जानकारी गराउँदछु ।”
अर्जुन कुमारको निर्माणमा अर्जुन कुमार फिल्मस् प्रालिको ब्यानरमा चलचित्र तयार भएको हो। निर्देशक निकेश खड्काको अभिनय रहेको चलचित्रमा स्वस्तिमा खड्का, सुपुष्पा भट्ट, अभिनेता अर्पण थापा, आमिर गौतम, प्रतिक मान श्रेष्ठ, अनि महेष त्रिपाठी लगायत कलाकारहरूको अभिनय रहेको छ ।